नेपाल: एकदिवसीय क्रिकेटमा ऐतिहासिक पाइला - BBC News नेपाली
नेपाल: एकदिवसीय क्रिकेटमा ऐतिहासिक पाइला
1 अगस्ट 2018
आम्स्टल्फीनमा बुधवार नेदर्ल्यान्ड्ससँग खेल्दा नेपालले आफ्नो खेलकुदको इतिहासमा नयाँ अध्याय लेख्दैछ।
निरन्तरको प्रयास र त्यसअनुसार सफलतनाको सिँडी उक्लिँदै नेपाल विश्वको सोह्रौँ क्रिकेट राष्ट्रको रूपमा पहिलोचोटि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्दैछ।
एकदिवसीय प्रवेशको खेल जित्ने पहिलो राष्ट्र बन्ने लक्ष्यसहित नेपाल भीआरए क्रिकेट मैदानमा उत्रिँदैछ।
राणाकालीन समयमा दरबारबाट हुर्केको नेपाली क्रिकेटले आधा शताब्दी बिताएपछि सन् १९९६ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बामे सर्न थालेको थियो।
त्यसको २२ वर्षपछि बल्ल नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट (ओडीआई) को संरचनामा प्रवेश पाएको हो।
त्यसका लागि नेपाली खेलाडीहरूले गरेको निरन्तर सङ्घर्ष गरे। सीमित स्रोत, चरम आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका माझ नेपाली खेलाडीहरूको प्रतिभाले ढुङ्गाको च्यापमा तरुल फलेजस्तै गरी रोमाञ्चक यात्रा तय गरे।
यो जटिल यात्रामा झन्डै दुई पुस्ताका खेलाडीहरूले योगदान दिएका छन्। वर्तमान पुस्ताका खेलाडीहरूले त आफ्नो नाम अविस्मरणीय बनाएका छन्।
नेपाली क्रिकेटको एउटा कालखण्डका साक्षी रहेका नेपाल क्रिकेट सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डे भन्छन्, "यो यस्तो इतिहास हो। जसले हरेक नेपाली क्रिकेट प्रेमीलाई गौरन्वान्वित बनाएको छ। यो गजबकै प्रगति हो।"
नजिकको इतिहास हेर्दा पाँच महिनाअगाडि जिम्बाब्वेमा सम्पन्न विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ को नेपाल र क्यानडाको खेलमा सम्झिनुपर्छ।
लगभग हार निश्चित देखिएको सो खेलमा अन्तिम बलमा नेपालले जित्यो। त्यसका लागि खेलाडी करण केसीले अविश्वसनीय रूपमा अन्तिम बलमा नायक बनेका थिए।
तर यो एउटा उदाहरण मात्र थियो।
हरेक दिनको एउटा खेलअगाडि हामीमा एउटा प्रश्न हुन्थ्यो। अब हाम्रो करिअर सकिनेछ वा अगाडि बढ्नेछ ? धेरै वर्ष हामीले त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्‍यौँ
पारस खड्का, कप्तान, राष्ट्रिय क्रिकेट टोली
त्यस्ता थुप्रै खेल र अनेकौँ नाटकीय परिणामहरूको शृङ्खलासँगै नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटसम्म पुग्ने बाटो बनाएको हो।
त्यसैले कप्तान पारस खड्काले भनेका थिए, "हरेक दिनको एउटा खेलअगाडि हामीमा एउटा प्रश्न हुन्थ्यो। अब हाम्रो करिअर सकिनेछ वा अगाडि बढ्नेछ ? धेरै वर्ष हामीले त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्‍यौँ।"
एउटा हारले सुनौलो सपना देखिरहेका खेलाडीहरूको एक दशक लामो मेहनत व्यर्थ जान सक्थ्यो।
तर अन्तत: अहिले नेपाल क्रिकेट खेल्ने विश्वको उत्कृष्ट १६ राष्ट्रभित्र समेटिएको छ।
नेपालले सन् १९९६ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थाल्यो। विश्व क्रिकेटको मुख्य संरचना मानिने विश्व क्रिकेट लिगमा डिभिजन २ को मान्यता जोगाउन नसकेपछि पुन: सन् २०१० बाट डिभिजन ५ को प्रतिस्पर्धामा उत्रियो।
सन् २०१२ मा डिभिजन ४, अर्को वर्ष डिभिजन ३ जितेर नेपालले डिभिजन २ को च्याम्पियनशिप खेल्यो।
अनि गत फेब्रुअरीमा भएको डिभिजन २ को खेलमा आठौँ स्थानभित्र पर्न सफल भएपछि ऐतिहासिक एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता प्राप्त गर्‍यो।
यसैबीच नेपालले सन् २०१४ मा २० ओभरको टी-२० विश्वकप खेल्यो भने उमेर समूहको एसोसियट प्रतियोगितामा विश्व क्रिकेटमा प्रभावकारी प्रदर्शन गरेको छ।
क्रिकेट कप्तान पारस खड्कासँग कुराकानी
पर्याप्त सुविधा, आर्थिक लाभ वा ढाढसविनै पनि नेपाली खेलाडीहरूले यो स्थान सम्म राष्ट्रिय टोलीलाई यो स्थानमा पुर्‍याएका हुन्।
हजारौँ प्रतिभाशाली खेलाडीहरूमध्येबाट उनीहरू छानिएका पनि थिएनन्। देशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुगेको क्रिकेट स्टेडियम पनि थिएन।
सरकारले क्रिकेट प्रवर्धन गर्न आफ्नो ढुकुटी पनि खोलिदिएको थिएन। प्रतिद्वन्द्वीहरू पनि चानचुने थिएनन्।
अहिले पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ आफैले सिर्जना गरेको चरम विवादमा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटेको छैन।
तर यस्ता प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि नेपाली खेलाडीहरू हताश भएनन्।
Image caption नेपाली कप्तान पारस खड्का र नेदरल्याण्ड्सका कप्तान पिटर सिलर
अबको लक्ष्य 'टेस्ट मान्यता'
एकदिवसिय अन्तर्राष्ट्रिय प्राप्त देशको मान्यता पाएपछि कप्तान पारस खड्काले भने,"यो हाम्रो थालनी हो। बल्ल हामीले वास्तविक यात्रा सुरु गरेका छौँ।"
नेपालले खेल्ने प्रत्येक खेल र खेलाडीहरूले जोड्ने व्यक्तिगत रन एवम् विकेटको अब बेग्लै महत्त्व हुनेछ।
नेदर्ल्यान्ड्समा थालेको यो एकदिवसीय यात्रा कम्तीमा चार वर्षसम्म सुरक्षित छ।
यसैबीच अर्को इतिहास कोर्ने लक्ष्य खेलाडीहरूले बनाइसकेका छन्।
गतहप्ता लर्ड्समा खेलिरहँदा कप्तान पारसले उक्त लक्ष्य दोहोर्‍याउँदै भने, "अबको हाम्रो लक्ष्य टेस्ट राष्ट्र बन्नु हो।"
एकदिवसीय क्रिकेट खेल्नु भनेको क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो स्वरूप मानिने टेस्टको मान्यता पाउने सँघारनजिकै पुग्नु पनि हो।
विदेशी टोली नेपालमा एकदिवसीय क्रिकेट खेल्न इच्छुक: पारस खड्का